मल्लकालिन सम्पदा ‘बालाजु बाइस धारा’ : कसरी सुरु भयो मेला ~ नेपाली समाचार | Latest News from Kathmandu, Nepal
मल्लकालिन सम्पदा ‘बालाजु बाइस धारा’ : कसरी सुरु भयो मेला
By नेपाली कान्छा on 4:10 AM | nepal news, samachar, नेपाल खबर | No comments
काठमाडौं बालाजुबाट बाइपासतर्फ मोडिएपछि एउटा सितल पार्क भेटिन्छ, बाइस-धारा पार्क । अहिले शहरवासीको सुस्ताउने गन्तव्य हो यो । नागर्जुन जंगलको फेंदमा अवस्थित यो मनोहर पार्कको खास आकर्षण भनेको बाइस धारा हो । अर्थात नागार्जुनको फेंदको मुलबाट निस्किएको पानी र २२ वटा ढुंगे धारा ।
यो धारा अहिले बनाइएको होइन । करिब ३ सय बर्ष बनाइएको हो । मल्लकालमा । अन्तिम मल्ला राजा जयपप्रकाश मल्लले । अर्थात बाइस धारा एक ऐतिहासिक सम्पदा हो ।
त्यसो त बाइस धाराको पौराणिक एवं धार्मिक महत्व पनि छ । यो धार्मिक तथा हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको आस्थाको केन्द्र मानिन्छ । पौराणिक कथन के छ भने, महायानी दार्शनिक आचार्य नागार्जुनले बुद्ध भगवानको स्मरण गरी यही जामाचो पहाडमा -हाल नागार्जुन) रहेको गुफामा ध्यान-साधना गरेर सिद्धि प्राप्त गरेका थिए । त्यही कारण यस क्षेत्रलाई नागार्जुन भनिएको मानिन्छ ।
बाइस धारा मेला
आउँदो सुक्रबार यहाँ भव्य मेला लाग्छ । यो मेलाको आफ्नै धार्मिक महत्व छ । चैत शुक्ल पूणिर्माका दिन यहाँ बर्षेनी मेला लाग्ने गरेको हो । यस दिनलाई नेवार समुदायले ल्हुतिपुन्हिको रुपमा मनाउने गरेको उल्लेख छ ।
के मान्यता छ भने, यस दिन मन्नादी देवीको जन्म भएकाले महिलाले बाइस धारामा नुहाईधुवाई गरेमा फलिफाप हुन्छ । किम्वदन्ती अनुसार विपस्वी बुद्धले कमलको फूल रोपेर मन्त्रोच्चारण गर्दा यहाँ स्वयम्भू ज्योतिरुप उत्पति भयो । यसैको सम्झनामा ल्हुतिपूणिर्मा मनाउने गरिएको हो ।
ल्हुति पूणिर्माको दिन बाइसधारामा स्नान गरी मृत्त आफन्तको नाममाब बत्ती बाल्ने परम्परा छ । साथै यसै दिन नुवाकोटको कडल्चोक भगवतीलाई पनि बालाजुमा ल्याएर त्यहाँको हालको सेतो पाटीमा राखी हवन तथा राँगाको बलि दिने परम्परा रहेको उल्लेख छ । मनमैजु देवीको जात्रासँग पनि बालाजु बाइसधाराको प्रसंग जोडिएको छ । ल्हुती पूणिर्माको मेलासँग मनमैजु जात्रा पनि सुरु हुन्छ । यस दिन बालाजुको बाइसधारामा नुहाएर मनमैजु देवीको दर्शन गरेमा आफ्नो मनोकामना पुरा हुने धार्मिक विश्वास छ ।
मल्लकालिन सम्पदा बाइस धारा
मल्लकालमा बनेको हो, बालाजु बाइस धारा । सबैभन्दा पहिले बालाजुमा कान्तिपुरका राजार जयप्रकाश मल्लले ढुंगे धारा बनाएका थिए । यो नेपाल संवत् ८७५ को कुरा हो । मल्लकालका अन्तिम राजा मानिन्छ, जयप्रकाशलाई । विश्वकै सबैभन्दा सानो मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने उनले आफ्नो जीवनकालमा बालाजु ढुंगेधारा र गोकणेश्वरमा मन्दिर बनाए । त्यसबेला उनले बालाजुमा २१ वटा धारा बनाएका थिए । पछि वि.सं. १८५५ मा राजा रणबहादुर शाहले एउटा ढुंगेधारा स्थापना गरे ।
बाइसधारामा नुहाउँदा छाला रोग निको हुने
बालाजु बाइस धारामा नुहाउँदा छाला सम्बन्धी रोग निको हुने विश्वास छ । खासमा यहाँ बग्ने पानीको मुल नुवाकोट डाँडासँग जोडिएको छ । देवीघाटको पानी नै यहाँ आउने र सो पानीले नुहाएमा छाला सम्बन्धी सम्पूर्ण रोग निको हुने विश्वास छ ।
यो ठाउँ काठमाडौं उपत्यकाको पश्चिम उत्तरतिर नागार्जुन जंगलमुनी पर्छ । यस स्थानलाई नेवार समुदायले ल्हुति भन्ने गर्छन् । नागार्जुनको वनमा एक किसिमको ल्हुति भन्ने फल पाउने गरिएको र उक्त फलको रस मिसिएर त्यहाँको पानी बग्ने भएकाले उक्त पानी औषधिय महत्वको रहेको बताइन्छ ।
कस्तो छ बाइस धारा क्षेत्र ?
नागार्जुन जंगलको फेंदमा अवस्थित मनोरम पार्क हो यो । करिब १ सय ६२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ यो । पछिल्लो समय यो पार्क राजधानीबासी सुस्ताउने गन्तव्य बनेको छ ।
यहाँ बाइसधारासँगै रमाइलो पार्क, मन्दिर, गुम्बा अवस्थित छ । भनिन्छ, भानुभक्त आचार्यले यहाँको सौन्दर्यमा मोहित भएर कविता नै रचना गरेका थिए, ‘यति दिनपछि मैले आज बालाुज देख्या, पृथ्वी तल भरीमा स्वर्ग हो जानी लेख्याँ ।’